अरुलाई हसाउन निकै सजिलो तर आफू हाँस्न गाह्रो: बल्छी ध्रुबे « News of Nepal
जीवनमा संघर्ष के हो भनि बुझेका कलाकारिता क्षेत्रमा देश विदेश चिनिन सफल एक हाँस्य कलाकार जो विगत ८ वर्ष देखी ‘मेरी बास्सै’ टेलिसिरियलका एक पात्र ‘बल्छी ध्रुबे’ उपनामले चिनिएका मरिचमान श्रेष्ठसंग प्रदिप विवश भण्डारीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप
मेरो जन्म २०४५ साल माघ २४ गते गोरखा जिल्ला तापुकोट गाविस वडा नंं. १ मा भएको हो । म एउटा सामान्य गाँउमा जन्मिएको मान्छे त्यसैले मेरो बाल्यकाल पनि अन्य गाँउमा जन्मिएका नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुको जस्तै कुटो कोदालो घाँस दाउरा गरेर नै बित्यो । म सानोमा निकै चन्चले थिए तर उत्तिकै काम गर्नमा अल्छि पनि थिए । घरको कान्छो भएर होला सबैको माया पाएको थिए । एक शब्दमा भन्नुपर्दा मेरो बाल्यकाल रमाईलोसंग नै बित्यो भन्नुपर्छ ।
आजभोलि त्यहि ‘मेरी बास्सै’ टेलिसिरियलमा नै व्यस्त छु । स्टेज कार्यक्रमका लागि कहिले नेपालका विभिन्न जिल्ला त कहिले विदेश तिर जाने यस्तै गर्दै दिनचर्या बितिरहेको छ । र अब हामी एउटा फिल्मको स्क्रिप्ट लेखनमा छौ अब चाँडै नै हामी फिल्म बनाउने तयारीमा जुटेका छौ ।
कलाकारिता क्षेत्रमा आउनका लागि के के संघर्ष गर्नुभयो ?
मानिसले हरेक क्षेत्रमा आउनका लागि संघर्ष त गरेकै हुन्छ त्यस्तै मैले पनि संघर्ष धेरै गरेको छु । यदि आफ्नो यसै क्षेत्रमा झुकाब छ भनेपछि संघर्ष गर्दा दुःख लाग्ने तर पछि रमाईलो अनुभुति पनि हुँदो रहेछ । मलाई ‘मेरी बास्सै’ टेलिसिरियलमा ल्याउने केदार घिमिरे (माग्ने बुढा) हुनुहुन्छ । म यहाँसम्म आउनुको श्रेय केदार घिमिरे र सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) लाई दिन्छु ।
‘बल्छी ध्रुबे’ पात्रलाई न्याय दिन कतिको सहज छ त ?
यो पात्रलाई न्याय दिनका लागि पहिले त मलाई निकै गाह्रो भयो । मेरो लागि यो पात्र केदार दाईले नै जन्माउनुभएको हो । कहिले काहि बोल्दा मिल्दैन थ्यो त्यतिबेला केदार दाईले मलाई यसो गर भनेर सिकाउनु हुन्थ्यो । हरेकलाई नयाँ कुरा गर्दा गारो त हुन्छ नै तर पछि पछि बानी पर्दै जाँदा आफै मिल्दो रहेछ । तर यसरी आफ्नो आवाज भन्दा बेग्लै आवाज निकाल्दा अलि घाँटीमा भने समस्या आउँदो रहेछ ।
यदि यस क्षेत्रमा होस या अन्य कुनै क्षेत्रमा आउन चाहानुहुन्छ भने रमाईलो मात्र सोचेर नआउनुहोला । यस क्षेत्रमा अरुलाई हसाउन सजिलो छ तर आफू हाँस्न निकै गाह्रो छ । याे क्षेत्रमा लगणशील रहेर आफूमा आत्मविश्वास छ भने तपाई यस क्षेत्रमा अवस्य सफल हुनुहुनेछ । तपाईले सोचेको आँटेको पुग्नेछ । आफ्नो गन्तव्य के हो भन्ने बुझेर आउनुभयो भने र आफुले केहि सिप सिकेर आउनुभयो भने तपाइलार्ई अझ सहज हुन्छ । मेरो तर्फबाट राम्रो गर्छु भन्दै आउने कलाकारहरुलाई स्वागत छ ।
नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला । कहि कतै गल्ती भए सच्याउनका लागि हामीलाई सल्लाह सुझब दिनुहोला । तपाईहरुको सल्लाह सुझाबले नै हामी अगाडि बढ्ने हो । जुन दिन तपाई सल्लाह दिन छाड्नु हुन्छ माया गर्न छाड्नु हुन्छ त्यो दिन हाम्रो कला पनि मर्नेछ । त्यसैले हामीलाई सधै माया गरिदिनुहोस भन्छु । जय ‘मेरी बास्सै’